Ciidamadda jabuuti iyo alshabaab oo ku dagaalamay gobalka Hiraan – Radio Daljir
Ciidamadda jabuuti iyo alshabaab oo ku dagaalamay gobalka Hiraan
Febraayo 19, 2019 5:40 b 0
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo duleedka degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ku dhexmaray rag ka tirsan Ururka Al-Shabaab iyo Ciidamada Jabuuti oo ka mid ah Ciidamada AMISOM ee ka howlgalla Soomaaliya.
Dagaalka ka hor ayaa ciidamada Jabuuti waxa ay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen duleedka degmadaas,kadib markii weeraro hoobiyeyaal ah lagu qaaday Saldhig ay halkaasi ku lahaayeen,hayeeshee waxaa weerar kusoo qaaday rag ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dadku sugan degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in dagaal culus uu duleedka degmada Jalalaqsi ku dhexmaray ciidamada Jabuuti iyo Ururka Al-Shabaab,hayeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Al-Shabaab ayaa warar ay ku qoreen Baraha Internet-ka waxa ay ku sheegeen in dagaalkaas ay ciidamada Jabuuti khasaaro ku gaarsiiyeen,waxaana jirin warar madax banaan oo xaqiijinya warka kasoo baxay Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidamada Jabuuti oo ka mid ah AMISOM ayaa weli dhankooda dagaalkaas ka hadlin,waxaana jirtay in habeen ka hor saldhiga Ciidamada Jabuuti ee degmada Jalalaqsi ay Al-Shabaab hoobiyeyaal ku weerareen taas oo keentay inay Ciidamada Jabuuti dhaq dhaqaaqyo Ciidan ay sameeyaan.
Sucuudiga iyo somaaliya oo ka wada hadlay dib-u-qaabaynta dhaqaallaha Soomaaliya
Siyaasi kenyan ah oo ka hadlay dhibaatada ka dhalan karta khilafka kenya & Somaaliya